“SHARIIF, INA SHARIIFKEE TAHAY”? – Ismail Warsame Blog
“SHARIIF, INA SHARIIFKEE TAHAY”?
Ismail Warsame	Uncategorized	 September 7, 2015 September 7, 2015 2 Minutes
“Haduusan aabahaa Shariif ahaanjirin, dee aniguba Shariif baan ahay”. Su’aashaa waxaa Shariif Xasan weydiiyey Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf. Shariif Xasan markaa wuxu ahaa Guddoomiyaha Baarlamaan Ku-Meel-Gaar ah ee Somalia. Su’aashu waxay salka ku hay’saa sicir-bararka madax-dhaqameedyada Somalia.
Dawladda Puntland ee asaas ahaan ka dhisantay madax-dhaqameedyada iyo waxgaradka dadweynaha gobollada midoobay, waxay dhaxashay sadex dabaqo ee madax-dhaqameed:
1. Soo jireen
2. Dawladdii Siyaad Barre ka abuurran
3. Gadaal ka abuurran aan joogsi la hayn
Mar haday door horseednimo ka qaateen aassaaskii dawladda, waxay noqdeen awood dawladda ka sareysa, qaarkoodna uba qaatay in dawladdu tahay shaqaale iyaga hoos imaanaya. Waxba kuma jabna taa, marka laga eego in dawladdu tahay adeeggaha dadweynaha. Waxayse arrintu dhib noqoneysaa markii madax-dhaqameedyadu soo frageliyaan hawl-maalmeedka iyo awoodda dastuuriga ah ee Dawladda, sida ka dhacday Puntland sanadaddii 2000-2001.
Waagaa, Islaan Maxamed Islaan Muuse ayaa fara-marooqsaday curadnimada madax-dhaqameed ee Harti, isagoo u maraya saldhigiisa Garowe ee ah Magaalo-madaxda Dawladda Puntland. Islaan Maxamed, markaa wuxu qaatay doorka Ayatullah-ga Puntland. Madaxweynaha Dawladdu, si joogta ah ayuu guriga Islaanka u soo booqanjirey, la tashi iyo salaanba. Xiriirkaa dhaw ee laba mas’uul , wuxu ku dambeeyey in Madaxweynihii Dawladda madaxnimada laga eryo.
Boqor Maxamuud Boor Muuse iyo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle, labaduba waa ka curadsanyihiin Islaan Maxammed Islaan Muuse, marka laga eego Saldanada Majeerteen.
Boqor Maxammud wuxu ahaa nin ahlu diin ah, oo inuu duceeyo mooyee, wax kale aan danayn. Yeelkeede, waagaa sharkii waxaa u qaaday ninka marooqsaday Wakiilnimada Boqorka, Cabdullaahi Boqor Muuse “King Kong”,deedna isagu Boqorkii noqday. Islaan Bashiir waa nin dhawrsan, afgaaban, siyaasaddana iska ururiya, marar badanna diiday in isaga siyaasad loo adeegsado.
Waxa iyana jirey madax-dhaqameedyo kale oo aan tiro yareen, curadna ah, door weyna ka soo qaatay guullihii Puntland.
Dhibta madax-dhaqameedyadu waxay mar kale dawladda qabsatay, markii soo jeedin la dhex-keenay Golaha Wasiirrada in gunno loo qoondeeyo Issimada Puntland. Wasiirkii Arrimaha Gudaha, oo markaa ahaa Axmed Cabdi Xaabsade, ayaa ku adkaystay in A, B, C daraja ah loo qoondeeyo gunnada madax-dhaqameedyada, taa oo la isku mariwaayey, go’aankeedana Madaxtooyada Puntland loo daayey. Madaxtooyada uma cuntami soo jeedinta Wasiir Xaabsade ee A, B, C-da. Saf-balaaran ayey arrintu ku dambeysay.
Qoraal Ku Dar (Addendum) : Waxaa ka soo qayb-galay shirkii Imbagathi ee Kenya 2002-2004, Madax-dhqameedyood dhawr ah ee Beesha Mareexaan, kuwaa oo Ugaaska Guud ee Beeshu, Ugaas Cumar, ka carooday, Shirkiina uga kacay. Waxaa loo saaray madax-dhqameedyo uu hogaaminayo Garaad Saleemaanka Maxamuud Garaad/Dhulbahante, si ay u soo caro-celiyaan Ugaas Cumar. Ugaas Cumar waxa lagu yiri: “Waxaad tahay, Ugaas, soojireen. Waagii Siyaad Barre faragelinayey dhaqanka Soomaaliyeed, isaga oo magaccaabijirey madax-dhaqameedyo beeleed, waad ka aamustay. Kama aad celin Siyaad Barre, kamana aadan talin khatarta ay faragelintaa uleedahay dhaqanka Soomaaliyeed. Anagu, kuwii uu noo magaccaabey Siyaad Barre, ayaan iska qaadanay. Ugaas, adiguna tan aqbal”.
Qore: Ismail H. Warsame
Previous Post How Did We start Puntland Founding Administration?
Next Post “SHARIIF, INA SHARIIFKEE TAHAY” ?